ဂေါ်မစွံသမားချိဖတို့ စော်ရဖို့ သိထားရမယ့် အဆင့် (၄) ဆင့် | သိလိုရာမေး
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် ဂေါ်မစွံသမားချိဖတို့ စော်ရဖို့ သိထားရမယ့် အဆင့် (၄) ဆင့်
ဒီအကြောင်းတရားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ချိဖတို့အနေနဲ့ လက်တွဲဖော်ရဖို့ တနည်းအားဖြင့် စော်ရဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စလို့ ပြောလို့မရတော့ပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် စော်မရ ရကောင်းလား? ဆိုပြီး ထိုင်ဆွေးပြီး ငေးမောနေရင်တော့ ဘာမှအကြောင်းထူးမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အခုတခေါက်မှာ သိလိုရာမေးကနေ လူတကာပေးနေကြ ခပ်ပေါပေါအကြံဉာဏ်တွေမဟုတ်ပဲ ချိဖတို့ စော်ရဖို့ ခုချက်ချင်းထပြီး လက်တွေ့အသုံးချလို့ရနိုင်မယ့် အဆင့် (၄) ဆင့်ကို ဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။
(၁) ပါးစပ်ကပဲ ညည်းမနေပါနဲ့… လက်တွေ့လှုပ်ရှားပါ…
ကိုယ့်ကိုချစ်ပေးမယ့်… ကိုယ်ကလဲ ချစ်ရတဲ့ စော်လေးရဖို့ဆိုရင် ပါးစပ်က FA ဆိုပြီး အော်နေရုံနဲ့ မပြီးတဲ့အတွက် လက်တွေ့ကျကျနဲ့ လှုပ်ရှားဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ကြွေနေတဲ့ကောင်မလေးရှိရင် သူ အွန်လိုင်းမှာ မီးစိမ်းနေလား? ခုပဲ စကားသွားပြောလိုက်ပါ! မရှိသေးရင် အပြင်ထွက်ပြီး ကောင်မလေးတွေနဲ့ တွေ့ပါ… စကားပြောကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မိတ်ဆက်ပါ… မိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ… စော်ရဖို့ မရဖို့က မင်းအပေါ်မှာပဲ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမူတည်ပါတယ် ချိဖတို့…
(၂) သူ့အကြောင်းကို ကြိတ်ပြီး လေ့လာပါ…
ကဲ ကိုယ်ကြွေနေတဲ့သူကို တွေ့ပြီဆိုပါစို့! စကားစပြောတာမျိုးလို လက်တွေ့လှုပ်ရှားတာက တပိုင်း… သူက ဘယ်လို Personality မျိုး ရှိလဲ? သူက ဟာသဉာဏ်ရှိတဲ့ ဘဲကို ကြွေတာလား? ဒါမှမဟုတ် စမတ်ကျတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ကြိုက်တာလား? အစရှိသဖြင့် သူနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို စုံစမ်းပါ … ဒါပေမယ့် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးတော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့… ပြောချင်တဲ့သဘောက အစပိုင်းမှာ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကြီးနဲ့ သိချင်ရက် ငမ်းငမ်းတက်ပုံစံမျိုး လုပ်တဲ့ ယောကျာ်းမျိုးက တခါတလေ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အမြင်မှာ အပေါစားဆန်တတ်ပါတယ်။
(၃) သူမရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ…
ချိဖအနေနဲ့ သမီးရည်းစားဖြစ်မှ သူမရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးလို့ ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ သမီးရည်းစားအဆင့်မရောက်ခင် အချိန်မှာလဲ သူမလိုအပ်မယ် ထင်တဲ့အရာလေးတွေ၊ သူမ တောင်းတဲ့ အကူအညီသေးသေးလေးတွေ အစရှိတဲ့ အရာလေးတွေကို သတိတရနဲ့ လုပ်ပေးလို့ ရပါသေးတယ်။ မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို ဂရုတစိုက်ရှိတဲ့သူ၊ အလေးထားတဲ့ ယောကျာ်းတွေအပေါ် ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကြတတ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ စော်လေး ကိုယ့်ကို ပြန်ကြိုက်ဖို့ ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးပါတယ် ချိဖတို့…
(၄) ချစ်ကြောင်း ကြိုက်ကြောင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြောရဲပါစေ…
FA သမားတွေထဲမှာ တချို့သော ချိဖတွေက အပေါ်က ၃ ဆင့်ကိုတော့ ကျော်ဖြတ်ပြီးကြပါရဲ့… နောက်ပိုင်းမှာ ဖွင့်ပြောလိုက်ရင် အငြင်းခံရမှာစိုးလို့ အဖျားရှူးသွားကြတာတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပြောချင်တာက မလုပ်ကြည့်ပဲနဲ့ အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင်ဘူး မသိနိုင်တဲ့အတွက် အဖျက်အတွေးတွေကို မေ့ထားပြီး အရင်ဆုံး ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ငြင်းတာ မငြင်းတာက သူ့အပိုင်း၊ ဖွင့်ပြောရမှာက မင်းအပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်လို့ ငြင်းခံရရင်တောင် ကြိုးစားလိုက်သေးတာပဲ ဆိုတဲ့ ဖီးလ်က ဘာမှမလုပ်ပဲ ဒရာမာချိုးနေတဲ့ ဖီးလ်ထက်တော့ သာပါသေးတယ်။
ကဲ သိလိုရာမေးကနေ ခုပြောပြလိုက်တဲ့ ဂေါ်မစွံသမားချိဖတို့ စော်ရဖို့ သိထားရမယ့် အဆင့် (၄) ဆင့်ကို ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ FA ချိဖတို့အနေနဲ့ စော်ရဖို့ လက်တွေ့အသုံးချဖို့ပဲ လိုပါတော့တယ်ခင်ဗျာ…